“Farmaajo Ayaa Jabuuti U Saxeexay In Ay Biyo Ka Qaadato Somaliland, Maanta Taladii Meel Kali Ah Ayay Ku Ururtay Waxaana Wax Lala Yaabo Ah Hadalkii Xanafta Lahaa Ee Madaweynaha” | Foore News
Home Warar “Farmaajo Ayaa Jabuuti U Saxeexay In Ay Biyo Ka Qaadato Somaliland, Maanta...
“Farmaajo Ayaa Jabuuti U Saxeexay In Ay Biyo Ka Qaadato Somaliland, Maanta Taladii Meel Kali Ah Ayay Ku Ururtay Waxaana Wax Lala Yaabo Ah Hadalkii Xanafta Lahaa Ee Madaweynaha”
Hargeysa, January 4, 2021- (Foore)- Mujaahid Cabdisalaan Yaasiin Maxamed oo ka mid ah Aqoonyahannada Somaliland iyo aasaasayaasha Bar-kulanka Somaliland-jire oo horena uga mid ahaa odayaasha Madasha Wada Tashiga iyo Toosinta Qaranka Somaliland ayaa si adag u dhaliilay safarkii Madaxweynaha Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi ku tagay waddanka Jabuuti.
Cabdisalaan Yaasiin oo shalay Telefishanka Bulsho TV iyo Wariye Maxamed Jiglan ugu warramay Magaalada Hargeysa waxa uu dhaliillo culus u soo jeediyay safarkii Madaxweynaha Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi uu ku tagay waddanka Jabuuti oo madmadaw badani ku jiro sida uu hadalka u dhigay iyo iyada oo la sheegay buu yidhi in Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uu waddanka Jabuuti u saxeexay in ay Biyo ka qaataan dhulka Somaliland ee u dhaw xuduudda Jabuuti, halka uu sidoo kale Prof Cabdisalaan Yaasiin waxa lala yaabo oo aad u xun ku tilmaamay hadalladii uu Madaxweyne Muuse kaga khudbadeeyey Degmada Agabar ee Gobolka Gabiley oo uu ku tilmaamay kuwo xanaf leh oo umadda kala fogaynaya.
Cabsisalaan Yaasiin waxa uu Madaxweynaha ugu baaqay in umadda loo soo ban dhigo waxa uu kala soo hadlay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti oo aan umadda laga qarin ajandaha qarsoon ee labada dhinac ka wada hadleen. “Arrinta calaamatul su’aasha weyni dul saaran tahay waxa weeyi Madaxweynuhu shan maalmood buu joogay Jabuuti. Arrinta biyaha ee la hadal hayo mooyee wax alla wax kale oo ka soo baxay ma jiro muddoda intaasi dhan ee uu ku maqnaa. Umaddani xaq bay ugu leedahay in ay ogaadaan waxa Madaxweynuhu intaa ku maqnaa. Waxa ay ahayd in uu umadda u sheego waxa uu shantaa maalmood Jabuuti ka qabanayay. Kenya markii uu tagay waa lala socday safarkiisa oo xataa dawladda Kenya ayaa mar walba ka hadlaysay waxa ay ka wada hadleen labada Madaxweyne. Xataa Biyaha la hadal hayo ee Jabuuti Madaxweynuhu kama wada hadal in ay kala saxeexdeen. Waxaan lagu odhanayaa oo meelaha qaarkood laha hadal hayaa in Farmaajo uu isagu u saxeexay Madaxweynaha Jabuuti oo marka hore isagu waydiistay. Kaasi oo yidhi anigu waan ogolahee marka dambe Somaliland waydiiso. Waxyaabaha uu Madaxweyne Muuse Biixi ku tagay ay ka mid tahay arrimahaasi oo inta uu u yeedhay ina Geelle ku yidhi waar dee wadaadkii meeshaa joogay (Farmaajo) waa ii ogolaadee, dee adiga ayaa meeshii masuul ka ahe aad Biyihii noo saxeexdaan. Waxa muhiim ah in Madaxweynuhu innoo sheego waxa kale ee meesha ku jira ee laga wada hadlay”. Ayuu yidhi Professor Cabdisalaan Yaasiin.
Dhinaca kale Cabdisalaan Yaasiin waxa uu ka hadlay hadalladii dhawaan buuqa dhaliyay ee ka soo yeedhay Madaxweynaha Somaliland ee la xidhiidhay qaabkii loo kala helay doorashooyinkii dalka ka qabsoomay waxaanu yidhi: “Hadal buu jeediyay oo hadalka uu degmada Agabar ka jeediyay waxa uu ahaa hadal xanaf leh. Arrimo hore oo xanaf lahaa oo aan looba baahnayn in la soo faqo wakhtigan ayuu isagii soo faqay. Isagii baabu dhib ku noqday hadalkaa xanafta lihi. Aadbaanu ugu dhaliilnay, dadku way wada dhaliileen. Waxa ay ahayd in uu ka hadlo Agabar iyo waxa uu u qaban karo ee horumarkeeda ah ee beeraha leh laakiin may ahayn in uu waxaa ka hadlo haddii aanu Jabuuti safarkiisa waxa uu la soo kulmay ka warramayn iyo wadadaa Jabuuti illaa Agabar sida loo samaynayo haddaanu ka warramayn may ahayn inuu waxan ka hadlo kale.
Ugu dambayn Prof Cabdisalaan Yaasiin waxa uu sheegay in dhibaatooyinka dalka yaalla ay ka mid tahay taladii umadda oo meel kali ah ku ururtay taasi oo meesha ka saaraysa dawlad wanaaggii ay umaddani filayeen muddoda dheer waxaanu yidhi: “Maamulkii dalku waxa uu ku koobnaaday meel kali ah, dad baa isku koobay oo gacanta ku haysta. Dawladnimadu haddii ay dadka oo dhan hanan waydo waxba innoo dhismi maayaan. Madaxweynayaashii dalkan soo maray afartii ugu dambeeyey ee dalkan soo qabtay hogaankiisa ee soo gaadhay dastuurka inta aan ansixinay mid waliba talada wuu isku kooban oo isaga ayaa urursaday. Kooxihii ilaalin lahaa haddii ay tahay sharci dejintii iyo garsoorkii la doonayay in ay dheelli tiraan intiiba waad ogtihiin oo jeebadda ayaa lagu ritay”. Ayuu yidhi Prof Cabdisalaan Yaasiin Maxamed.
Previous articleXaaladda Xuquuqal Insaan Ee Somaliland Oo Laga Dayriyay Iyo Warbixinta Sanadka 2020 Oo Xambaarsan Xaalado Dhiilo Leh
Next articleMadaxweyne Laaca Aragtaye Laaga Ma Ogtahay?- Qalinka: Aqoonyahan Maxamed Dhimbiil